“Niyad Jabka Koobka Aduunka waxaa laga yaabaa in Neymar ay sii xoojiso”… Gianluigi Buffon – Gool FM
“Niyad Jabka Koobka Aduunka waxaa laga yaabaa in Neymar ay sii xoojiso”… Gianluigi Buffon
(PSG) 09 Luulyo 2018. Goolhaayaha cusub ee kooxda Juventus Gianluigi Buffon ayaa sheegay in niyad jabka kuubka aduunka 2018 in sii xoojin karto xidiga reer Brazil ee Neymar Jr, isla markaana suuragal ka dhigi karta inuu wax walba u kula guuleysto kooxda PSG.
26 jirkaan ayaa qirtay kadib guuldaradii 2-1 ahayd ay kala kulmeen xulka Belgium kulankii wareega siddeed dhamaadka inay ahay niyad jabkii gu wanaa xirfadiisa kubada cagta.
Neymar Jr ayaa lala xiriirinayaa inuu u dhaqaaqi doono kooxda reer Spain ee Real Madrid suuqan xagaaga, inkastoo Los Blancos war rasmi ah ay soo saartay ku beenisay arintan.
Hadaba Gianluigi Buffon ayaa shirkiisa jaraa’id ugu horeeyay ee kooxda PSG uu ka soo muuqday wuuxuu niyad dhis ugu sameeyay saaxiibkiis.
“Waxaan u maleynayaa in qof walba uu maro waqtiyo adag, ugu horeyn nolosha iyo xirfadeena kubada cagta”.
“Laakiin waxaa jirta xiliyo inaga dhigaysa inaan awood badnaano, Neymar waxaa suuragal ah inuu kula soo laabto PSG rajo ku aadan inuu kula guuleysto wa kasta, taasna waxay u fiican tahay isaga iyo kooxda”.
"Kama xumi in Ronaldo uu ii daba mareeyo Juventus balse waxaan ka xumahay ....." - Buffon oo hadlay!
HORDHAC: France vs Belgium, Wax Badan ka Ogaaw Kulanka Afar Dhamaadka Koobka Adduunka